Ansomone 200 IU Somatropin HGH, ka iibso hoormoonka koritaanka dadka ee Thailand
qiimaha joogtada ah 17,000.00 ฿ Sale
Recombinant Hormoonada Horumarka Aadanaha Ee loogu talagalay
(Somatropin / HGH, asalka rDNA)
[ISTICMAALKA LAGU QAADO]
Anhui Anke Biotechnology (Kooxda) Co., Ltd.
Ansomone® waa nooc ka mid ah nadiifinta, lyophilized ee Horumarinta Horumarinta Aadanaha (HGH) oo leh astaamiyo amma 191, oo laga soo qaatay injineeriya E.coli, isla markaana waxay la mid tahay hormoonka koritaanka dabiiciga ah ee qaabka amino acid iyo qaab dhismeedka saddex-qaab. Ansomone® waxaa loogu talagalay in lagu guuldareysto koritaanka sababtoo ah dhibaatada hormoonka koritaanka hormoonada hormoonka (GHD) iyo Cudurka Turner ama Kalyaha oo ku fashilmay. Ansomone® waxaa loo isticmaali karaa in lagu bogsado boogta qalliinka ama boogta gubatay waxayna leedahay saameyn wanaagsan si loo ilaaliyo dadka da'da ah. Noocyada wax-soosaarka Ansomone® waxay u-aqoonsan yihiin heerka GMP-ga SFDA.
Magaca guud: hormoonka kobcinta bini'aadamka ee dibudhiska ee cirbadeynta.
Magaca ganacsiga: Ansomone®
Waxyaabaha dabiiciga ah: Saamaynta hormoonka koritaanka bini-aadamka.
FARMAKOLOGY IYO TOXICOLOGY
Ansomone® waxay ku dhaqmaysaa ficilo la mid ah hormoonada koritaanka hormoonka aadanaha. Waxay kicin kartaa kicinta iyo kala-duwanaanshaha kondrocyte epiphysis, kiciyaan korriinka unugyada kartoonka matoorka, kicinayaan faafidda iyo kala-saarista osteoblastka; Markaa dardar-tirka korriinka korriinka iyo wanaajinta fiditaanka epiphysis. Ansomone® waxay kor u qaadi kartaa iskudhafka borotiinka jirka oo dhan; Dib u celinta ciriiriga nitrogen ee xun ee ay sababtay boogta iyo qalliinka; Sax u gaabiya hypoproteinemia sababtoo ah infekshan daran ama hepatocirrosis; Kicinta sixitaanka difaaca jidhka iyo xoojinta lymphadenoid, makrophage iyo lymphocyte, sidaas darteed kor u qaadidda awoodda caabuqa caabuqa; Kicinta qadarinta kollajiyootka, fibroblast iyo macrophage ee goobaha gubashada iyo qalliinka, markaa dardar-bogsashada boogta; Kor u qaadista qalabka wadnaha ee loo yaqaan 'cardiocytes', si loo hagaajiyo qandhada wadnaha iyo hoos u dhigida isticmaalka oksijiinta wadnaha; Waxay u hoggaansamaan lipometabolism, markaa waxay hoos u dhigtaa heerka kolesteroolka iyo heerka hoose ee lipoproteins; Dhammeystiraan la'aanta ama yaraanta hormoonka koritaanka, waxay xakameysaa dadka waaweyn lipometabolism, osteometabolism, wadnaha iyo kelyaha.
Waxaa lagu soo waramayaa in saameynta farmaajo isku mid ah lagu gaari karo iyada oo la marayo maamulka subagsan (sc) ama maamulka (IM). Inkastoo xuubka uu keeni karo qadar xoogan oo GH ah ee plasma, IM ayaa sidoo kale soo saari kara heer isku mid ah IGF-l. Qaadashada GH waa mid gaabis ah, Cmax badanaa waxay dhacdaa saacadaha 3-5 kadib mudista. Caddeynta GH waa iyada oo loo maro beerka iyo kalyaha, nolosha nuska ah ee nadiifinta waxay ku saabsan tahay saacadaha 2-3. GH-ga aan la ogaan karin ee Hure laga saaro ayaa ku dhowaad aan la qiyaasi karin. Dhammaan GH-ga habka wareegga waxa uu u jiraa qaab isku-dhafan oo leh GH-ku-qabasho oo la yiraahdo borotiinka oo ka dhigaya nolosha nuska GH sii dheeraaday.
Ansomone® waxaa loogu talagalay koritaan la'aanta koritaanka ilmaha sababtoo ah yaraanta hormoonka koritaanka hormoonka (GHD).
- Tamarta sare
- Niyadda Dheellitirka
- Badbaadinta Unugyada
- Hagaajinta waxsoosaarka kolestaroolka
Marka dib loo dhiso 1 ml Nadiif ah oo biyo ah oo laysku duro waa in lagu duraa darbiga dhalada, ka dibna ku dhaji fiilada si tartiib tartiib tartiib tartiib ah ilaa inta ka kooban si dhammaystiran loo kala diro, ha u gariirin si xun.
Qiyaasta lagu taliyey ee Ansomone® ee loogu talagalay daaweynta foosha xumida carruurta waa 0.1 ~ 0.15IU / kg maamul maalinlaha ah oo loogu talagalay bilaha 3 ee sanadaha 3. Nidaamka daaweynta ayaa la bedeli karaa iyadoo loo eegayo talooyin dhakhtar oo khibrad leh.
Qiyaasta lagu taliyey ee Ansomone® ee loogu talagalay daaweynta gubasho daran waa 0.2 ~ 0.14IU / kg maamulka subcutaneous ee toddobaadka 2.
Horumarka hormoonku wuxuu keeni karaa hyperglycemia; Waa la soo celin karaa markay maamulku socoto ama joojiso.
Dareen-celinnada xun waxay ku dhaceen 1% carruurta gaaban ee ku jira tijaabada caafimaadka. Dareen-celinta caadiga ah waxaa ka mid ah xanuunka yar, tingle, cirridka ku wareegsan goobta cirbadda iyo bararka xannibaadda, arthralgias. Dhammaan fal-celinta aan fiicnayn ayaa inta badan ka dhacdey bilawga daaweynta, waxayna ahaayeen kuwo wakhti ku-meel-gaadh ah oo dulqaad leh. Maamulka qiyaasta muddada dheer iyo sareeya ee rhGH ayaa laga yaabaa inay horumariyaan unugyada difaaca bukaanno yar. Si kastaba ha noqotee, xaddiga unugyada difaaca jirka ayaa si dhif u ah u noqon kara ilaa xadka 2 mg / L kaasoo saameyn kara waxtarka daweynta.
1. Ansomone® looma isticmaali karo bukaanka ay epiphysis la xiray.
2. Ansomone® looma isticmaali karo bukaanka kansarka qaba neoplasia firfircoon. Daaweynta GH waa in la joojiyaa haddii caddaynta neoplasia uu kobciyo.
3. Ansomone® looma isticmaali karo bukaanada marxalad wakhti xannuun leh oo leh infakshan daran.
DIGNIINTA IYO HORUMARINTA
1. Daaweynta rhGH waa in lagu sameeyaa bukaanka GHD ee la ogaado oo si gooni ah loo qaato iyadoo la tixraacayo dhakhtar khibrad leh.
2. Dadka qaba cudurka sonkorta, qiyaas daawooyinka anti-glucourea waa in la hagaajiyaa inta lagu jiro daweynta rhGH.
3. Bukaanada loo yaqaan 'GHD' oo ay sababeen encephaloma ama boogta encephalic, horumarka iyo suurtagalnimada suurto galka cudurradaas waa in si dhow loola socdo.
4. Wixii bukaansocodka ACTH, qiyaasta ATCH waa in la hagaajiyaa sababta oo ah saameynta horumarinta ee rhGH waxaa laga yaabaa in la joojiyo iyadoo la marinayo isticmaalka ACTH.
5. Qalitaanka qanjirka 'thyroid' waa in si joogta ah loo baaro maxaa yeelay daaweynta hypothyroidism ayaa dhici karta bukaanjiifka inta lagu jiro daaweynta rhGH. Wixii la xiriira bukaansocodka, caawimaadda thyroid waxay lagama maarmaan u tahay hubinta saamaynta daweynta ee rhGH.
6. Daacadnimo taxadar leh waa in la qaadaa haddii foojignaantu dhacdo inta lagu jiro daweynta rhGH-ga sababtoo ah bukaannada ka soo gudbay cudurrada nidaamka qanjirada 'endocrine' (oo ay ku jiraan GHD) waxay u egtahay in ay taariiqda femur-ka ee femur ay u fududahay inay kala-tagaan.
7. Horumarka koritaanka ayaa laga yaabaa in uu keeno insulin-ta gobolka, dareenka waa in la bixiyaa haddii guluukoosha hooseeya uu muuqdo.
8. Ha qaadan xadiga xadidan ee rhGH, hal mar qiyaasta tallaalka rhGH wuxuu keeni karaa sonkorta dhiigga oo hooseysa waxaana lagu guuleystay sonkorta dhiigga oo sareysa. Waqti dheer oo ka baxsan-maamulida rhGH waxay u horseedi kartaa acromegaly.
9. Meelaha lagu duro waa in badanaa isbeddelaan haddii lipoatrophy.
HAWLGALKA IYO CARRUURTA EEDEYNTA DUMARKA
Laguma talineynin dumarka uurka leh iyo kuwa kalkaaliyaasha caafimaad inay aqbalaan daaweynta rhGH.
Jawaabta ku saabsan rhGH ee carruurta waxay la mid tahay kuwa qaangaarka ah ee farshaxanka, sunta shucaaca iyo farmasokokinetics, rhGH waxay badbaado u tahay isticmaalka carruurta.
Jawaab-celinta bukaan-socodka jirrada waxay la mid tahay kuwa qaan-gaarka ah ee farshaxanka, sunta sheybaarka iyo farmasokokinetiga, rhGH waxay u badantahay isticmaalka gogol-celiska.
KALA DUWAN EE BARNAAMIJKA
Jawaabaha daaweynta rhGH waxaa laga yaabaa in lagu xakameeyo glucocorticoid, sidaa daraadeed qiyaasta hydrocortisone waxay ka hooseysaa 10 ~ 15mg / m2 dusha jirka inta lagu jiro daweynta rhGH.
Isticmaalida istiraatiijiga ah ee unugyada non-androgenic inta lagu jiro daweynta rhGH waxay kordhin kartaa heerka koritaanka.
Wali ma jiraan warbixinta ku saabsan xadiga rhGH; Si kastaba ha noqotee, qiyaasta qiyaasta daawadu waxay keeni kartaa waxyeellada qaarkood, sida hypoglycemia oo bilawga ah ka dibna waxay ku guulaysatay hyperglycemia. Qiyaasta muddada dheer ee qiyaasta isticmaalka rhGh waxay u horseedi kartaa acromegaly.
Ka dhig 2 ~ 8ºC fogaanta. Nidaamka dib loo habeeyay oo lagu qasay Sterile Bjer si loogu talaalay ayaa lagu talinayaa in lagu kaydiyo 2 ~ 8ºC saacadaha 48, ha barafoobin.
WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY